दशैंको टीका : कुन देशमा कति बजे उत्तम साइत ? – Satyapati
दशैंको टीका : कुन देशमा कति बजे उत्तम साइत ?
काठमाडौं । आज बडादशैंको मुख्य दिन अर्थात् विजया दशमीका दिन विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले मान्यजनहरूबाट टीका र जमरा थापेर आशीर्वाद लिँदै मनाइन्छ । नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपालीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले टीका लगाउने उत्तम साइत सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष प्राडा माधवप्रसाद भट्टराईले धेरै नेपालीको बसोबास रहेका क्षेत्रबाट माग भएबमोजिम सम्बन्धित देशको ग्रहको दृष्टिअनुसार टीका लगाउने समय यकिन गरिएको बताए । समितिका अनुसार नेपालमा टीका लगाउने उत्तम साइत शुक्रबार बिहान १०ः२ बजे रहेको छ । यस्तै, भारतको देहलीमा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ९ः५५ बजे उत्तर साइत रहेको छ ।
यस्तै, अमेरिकाको न्युयोर्कमा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ९ः२१ बजे, केन्टुकीमा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ८ः४५ बजे, टेक्सासमा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ८ः१५ बजे र क्यालिफोर्नियामा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ७ः१५ बजे उत्तम साइत रहेको छ । क्यानडाको टोरन्टोमा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ८ः३५ बजे, जापानको टोकियोमा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ११ः५ बजे उत्तम साइत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
कुन देशमा कति बजे उत्तम साइत ?
एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोट: आज नेपालले इरानको सामना गर्दै
करमोहना गाउँमा रुवावासी
महाधिवेशनको मैदानबाट ओलीले भने, ‘अन्तरिक्ष पनि हाम्रो हो’
नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकका सेनालाई नेसनल डिफेन्स कलेजमा कोटा बढाउने भारतको घोषणा